Solution of Over hitting of PC / ल्यापटप तातेमा के गर्ने ? – Experimantal Site of Subas Niraula
Home	Informations	Solution of Over hitting of PC / ल्यापटप तातेमा के गर्ने ?
Solution of Over hitting of PC / ल्यापटप तातेमा के गर्ने ?
by Subas Niraula May 8, 2018
written by Subas Niraula May 8, 2018
आफ्नो ल्यापटप दैनिक प्रयोग गर्दा बढी तात्न सक्छ । तातेको ल्यापटपलाई उचित हेरचाह र संरक्षण गर्न सकिएन भने चाँडै बिग्रिन पनि सक्छ । बढ्दो गर्मीसँगै ल्यापटप बढी तातिने समस्या आउन सक्छ । ल्यापटपमा हुने ‘ओभर हिटिङ’को समस्या यसरी समाधान गर्न सकिन्छ…
ब्याट्री र पंखाको सरसफाइ
आफूले प्रयोग गर्ने ल्यापटपको ब्याट्री र पंखामा धुलो पस्ने भएकाले समयसमयमा सरसफाइ गर्नुपर्छ । ब्याट्री र पंखामा धुलो एवं फोहोर जम्यो भने ल्यापटपमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले फ्यान र ब्याट्रीको एक वा दुई महिनामा सरसफाइ गरिरहनुपर्छ । ब्याट्री र पंखामा भएको धुलो सरसफाइ गर्न ल्यापटपको खोल्न स्क्रु डाइभर र सावधानी आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसको सफाइका लागि ‘क्यान्नड एयर‘ चाहिन्छ । यसलाई ग्यास डस्टर पनि भनिन्छ । यो बजारमा सहजै पाइन्छ ।
कसरी सफा गर्ने
ल्यापटपको ब्याट्री तथा पंखाको सरसफाइका लागि सुरुमा त्यसलाई सिस्टमबाट अलग गराउनु पर्छ । त्यसपछि
क्यान्नड एयरले त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ । त्यसले भित्र रहेका फोहोर निकाल्छ । पंखा सफा गर्दा धेरै दबाब दिनुहुँदैन । सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्छ ।
सफा गर्दा यसो नगर्ने
चिसो वा पानी भएको कपडाले पुछ्नु हुँदैन । पंखाको ब्लेड्सलाई धेरै दबाब दिएर मोड्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । यदि पंखाले काम गर्न छोडेको छ भने धेरैबेर चलाउनु हुँदैन । धेरै समय सिस्टममा राख्यो भने ओभर हिटिङको समस्या झन् बढ्छ ।
१. कुलिङ किटको प्रयोग
ल्यापटप ओभर हिटिङको समस्या समाधानका लागि कुलिङ किटको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । बजारमा तीन सय रुपैयाँदेखि माथिका फरकफरक मूल्यका कुलिङ किट पाउन सकिन्छ । ल्यापटप पुरानो बन्दै गएको छ र बढी प्रयोग गरिन्छ भने कुलिङ किटबाट पनि समस्या आउन सक्छ । यस्तो बेलामा अतिरिक्त कुलिङ किटको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
२. उचित कुलिङ किट लिने
ल्यापटपका लागि प्रयोग गरिने कुलिङ किट ल्यापटपको बनावटसँग मेल खाने हुनुपर्छ । गलत पंखाको प्रयोगले ल्यापटपमा समस्या आउन सक्छ । कुलिङ किट किन्नुभन्दा पहिले ल्यापटप जाँच गर्नुपर्छ । जसबाट उचित पंखा किन्ने सल्लाह प्राविधिकले दिन सक्छ ।
३. ल्यापटप राख्ने तरिका
ल्यापटप प्रयोगका बेला त्यसले बेसबाट हावा लिइरहेको हुन्छ । त्यसैले सिरक, डसना तथा हावा छेक्ने सामानमाथि राखेर ल्यापटप चलाउनु हुँदैन । ल्यापटपले राम्ररी हावा लिन नसक्दा ओभर हिटिङको समस्या आउन सक्छ । ल्यापटप टेबल वा कपडा भएको ठाउँभन्दा अलग्ग राख्यो भने हिटिङ हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
कुलिङ फ्यानको सट्टा कुलिङ म्याटमा राखेर काम गर्न पनि सकिन्छ । बेडमा ल्यापटपको प्रयोग गर्दा मुनि कुनै कडा सामानजस्तो पुस्तक, काठको टुक्रा आदि राख्न सकिन्छ जसले हावा छेक्न नसकोस् ।
४. ब्याट्रीको सुरक्षा
ल्यापटपको ब्याट्रीलाई गर्मीमा बढी ख्याल गर्नुपर्छ । जसका लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ – चार्ज गरिरहेका बेला ल्यापटपलाई आफूबाट टाढा राख्नुपर्छ । ब्याट्री चार्ज भएपछि चार्जरलाई अलग गर्नुपर्छ ।यदि ब्याट्री तात्न थाल्यो भने लगातार ल्यापटपको प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ । अर्थात् केही समय बन्द गरेर चलाउनुपर्छ । कुलिङ किट प्रयोग गर्दा पनि ब्याट्री तात्ने क्रम रोकिएन र ब्याट्रीको ब्याकअप चाँडै सकिन थाल्यो भने लगातार चार्ज गर्नुको सट्टा ब्याट्रीपरिवर्तन गर्नुपर्छ ।
computer cooling systemscomputer overheating and shutting downcomputer overheating symptomscomputer overheating when playing gamescpu overheating fixlaptop overheating solutionslaptop overheating while gaming
What should we do if our phone got wet ?
कहिँ तपाहिले त एस्तो पासवर्ड प्रयोग गर्नुभएको छैन...
How to decrease Fat || Some Entertaining fact...
मानिसको शरीर सम्बन्धि जान्नैपर्ने ५० सत्य तथ्यहरू ||...